China Ski jaket ọkachamara elu mma windproof na a pụrụ ịdabere na ụlọ ọrụ na-emepụta | Ruisheng
Aha ika OEM
Nabata Logo Ndị ahịa OEM
Nha Ogo ọ bụla dị
Uzu Ọkwa A
Ihe Polyester / Nhazi, ihe eji acho
Ndi Agadi Okenye
.Zọ Jaketị, jaket windbreak ụmụ nwanyị
Ihe mgbochi-UV, ihe nkpuchi, QUICK DRY, Windproof
mgbochi mmiri, ikuku
1.Professional mkpuchi mmiri, mkpuchi ajị anụ na nro na nkasi obi, yana akwa na-adịgide adịgide nke ejiri 2400 polyester fiber nwee ike ijide njide ọkụ kachasị mma.
2.Atọ jaketị mmiri anaghị egbochi mmiri nwere ike ịrụ ọrụ n'okpuru isi nrụgide karịa 10000 mm. Mgbe ị nọ n’èzí, mee ka ahụ gị kpọọ nkụ ma nwee ntụsara ahụ n’oge niile, ma nwee ike iguzogide mmiri na-ezo ma ọ bụ nke mmiri na-ezo.
1) 2 aka akpa zippered na mkpuchi (paspọtụ ma ọ bụ kaadị nchekwa).
2) Otu akpa akpa ime abụọ, otu n’akpa uwe akwara ozi na otu akpa zipa.
3) Enwere mpempe akwụkwọ aka nri na aka ekpe iji chekwaa ọla gị (mgbaaka, ọla ntị, olu olu, wdg), ngwaọrụ ma ọ bụ ski gafere tupu ịkwaga.
4) Enwere eriri USB na-edozi ma na-akwado ngwaọrụ n'ime jaketị ahụ.
4. Uwe mmiri na-egbochi mmiri nwere ike ịnagide ihu igwe adịghị mma, dịka oke mmiri, mmiri ozuzo ma ọ bụ snow. O dicha nma karie ka igba elu, igba snow, ihe snow, ugwu, ije ugwu, ije njem, na jaket a nwere ike idi nma dikwa nma karia ndi ozo n’egwuregwu igba oyi ndi ozo ma obu ihe omume di iche iche.
Nke gara aga: Summer Mens Shot-sleeved Pajamas High Quality New 100% Cotton Comfortable Men Sleepwear Setịpụrụ
Osote: High Quality Omenala Men SoftshellJacket N'èzí
MenS 3 n'ime 1 jaket mmiri ozuzo Ahịa OEM n'èzí uwe ...